သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၃) (ကာမေသု – – -) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၃) (ကာမေသု – – -)
သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၃) (ကာမေသု – – -)
Posted by ကိုငြိမ်းအေး on Oct 11, 2011 in Buddhism, Contributor, Columnist, Opinion - Op-ed | 23 comments
၃။ ကာမအာရုံ (ကာမေသု)အား အလိုမတူ မပြုရခြင်းကို ပုံစံဖြည့်ကြည့်ခြင်း။
(ပုံစံအားဖြင့် သူတစ်ပါး သား၊ မယားအား အလိုမတူ ကာမ မလွန်ကျူးရခြင်း)
လူသားတွေသည် ကာမအာရုံများနှင့် ဆက်ဆံကြသည့်အခါမှာ ဒီအာရုံတရား တွေအပေါ်၌ အလိုမတူ (အလိုဆန္ဒနှင့် မတန်) ဖြည့်ကျင့်ခြင်း တနည်းအားဖြင့် ဖြည့်ကျင့် မှုလွဲမှားခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်မိနေကြမည်ဆိုပါက လူနှင့်လူ အချင်းချင်း ငြိမ်းအေးမှုရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ပုံစံအားဖြင့် လင်ရှိတဲ့မယား အပေါ်၊ မယားရှိတဲ့ လင်တွေအပေါ် အလိုမတူ ကျူးလွန်မိနေမည်ဆိုပါက ထိုကျူးလွန်သူတို့သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ယောက်ျားကောင်း၊ ယောက်ျားမြတ်အဖြစ်မှ လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်သလို ဇနီးဖြစ်သူသည်လည်း ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မိန်းမကောင်း၊ မိန်းမမြတ်အဖြစ်မှ တန်ဘိုးလျော့ကျသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ထိုသူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံနေထိုင်ရမှုဟာ ငြိမ်းအေးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူ့ငြိမ်းအေးမှုကို ထိခိုက်စေတာမို့ လူသားတိုင်း မိမိ ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ မှားယွင်းစွာ မပြုမိကြဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ “ကာမ” ဆိုတာကို အဖို၊ အမ အတွေ့အထိ (ဖောဋ္ဌဗ္ဗ) ထိတွေ့မှု လောက်ကိုပဲ ယူထားမယ်ဆိုရင် ဘောင်ကျဉ်းနေပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေရဲ့ အာရုံခံ အင်္ဂါများဖြစ်တဲ့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာနှင့် ကိုယ်တို့မှ နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရတဲ့ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာနဲ့ အတွေ့အထိ မှန်သမျှဟာ “ကာမအာရုံ“တွေပါပဲ။
ဒီကာမအာရုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သဘောတူပုံစံ တွေဖြည့်ကြည့် ကြရမယ်ဆိုရင် – –
၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်လို့ အာရုံခံစားကြတဲ့အခါမှာ မိမိနှင့် မသင့်သော မထိုက်တန်သေးသော ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်မှုများကို လိုလား၍ ရုံးစာ ရေးက အရာရှိလို နေထိုင်ချင်၊ သူဆင်းရဲက သူဌေးလို စားသောက်ချင်စတဲ့ မိမိတို့နှင့်မတန် ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်ကြခြင်းကြောင့် ထိုသူတို့သည် ဒေါင်းယောင် ဆောင်သော ကျီးကဲ့သို့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်ကာ နဂိုအခြေအနေ တန်ဘိုးမှ တဖြည်းဖြည်း လျှော့ကျသွားပြီး ဘ၀မှာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ရခြင်းသည် မိမိ မပိုင် (အလိုဆန္ဒနဲ့ မတန်) သော ကာမအာရုံတွေ အပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပေသည်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ကာမအာရုံတွေကို မဖြည့်ဆည်းမိဖို့ ဆင်ခြင်သင့်ပေသည်။
တချို့အမျိုးသမီးလေးများ အ၀တ်အစား အလှအပနောက် လိုက်မိလို့ ဘ၀ပျက်ရခြင်းသည်လည်း ကိုယ်နဲ့ (အလိုဆန္ဒနှင့် မတန်) မထိုက်တန်သေးတဲ့ ကာမအာရုံတွေကို ဖြည့်ဆည်းမိလို့ ဖြစ်ပေသည်။
စားသောက်မှု (အရသာ) ပိုင်းမှာလည်း မိမိခန္ဓာ (ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ခံအား)နဲ့ မသင့်တဲ့ အစားအသောက်များကို သုံးဆောင်မိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နဂို အနေမှ တဖြည်းဖြည်းလျှော့ကျသွားပြီး ရောဂါများဖြစ်မှုတို့ကြောင့် ဘ၀မှာ မငြိမ်းချမ်း မှုတွေဖြစ်ရခြင်းနှင့် ဗွီဒီယိုတွေ ကြည့်တဲ့အခါ၊ သီချင်းတွေနားထောင်တဲ့ အခါမှာ မိမိ မျက်စိ၊ မိမိနားတွေနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ (ခံနိုင်ရည်ပမာဏထက်ပိုတဲ့) ကြည့်ရှု၊ နားထောင်မှုတွေ ပြုမိကြခြင်းတို့ကြောင့် မျက်စိတွေ၊ နားတွေသည် နဂိုအနေမှ တဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့ကျ လာကာ မျက်စိမွဲလာခြင်း၊ နားထိုင်း (လေး) လာခြင်းတို့ကြောင့် ထိုသူတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်နေရခြင်းသည်လည်း မိမိတုိ့နှင့် မသင့်သော ကာမအာရုံတွေ အပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားလို့ပဲလို့ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပေသည်။
အာရုံတရားတွေ ခံစားဖို့အတွက် မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အာရုံခံအင်္ဂါတွေအပေါ် မသက်ဆိုင်သော (မသင့်သော) အာရုံခံစားမှုဖြစ်သည့် လိင်တူချင်း ဆက်ဆံ သွားလာ မှုများကြောင့် လူသာမန် အနေအထားမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း (ကိုယ်ခံအား) လျော့ကျသွားသည့် ယနေ့ခေတ် ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ (AIDS) တွေ ဖြစ်နေရခြင်းသည်လည်း မိမိနှင့် မသင့်သော မထိုက်တန် (အလိုဆန္ဒနှင့် မတန်) သော ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားလို့ပဲလို့ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့အခါတွင် ကမ္ဘာ့ပညာရေးလောက၌ လိင်ပညာရပ်ကို အခန်း ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် သင်ကြားပေးနေရသည်ဟု သိရပေသည်။
အာရုံတရားတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာ မိမိပိုင်သင့်တယ်၊ မပိုင်သင့်ဘူး၊ ထိတွေ့သင့်တယ်၊ မထိတွေ့သင့်ဘူးစသည့် အကြောင်းအကျိုးတွေကိုလည်း ပညာရပ်တစ်ခုလို သိရှိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အကြောင်းအကျိုးမသိပဲ နေထိုင်သွားလာမှုတို့ကြောင့် တချို့ဇနီးမောင်နှံများ အလိုဆန္ဒများ မပြည့်ဝကြကာ ခင်ပွန်းသည်က တခြားအမျိုးသမီးတွေနှင့် ဖောက်ပြန်သလို ဇနီးကလည်း တခြားအမျိုးသားတွေနှင့် ဖောက်ပြန်ကြခြင်းတို့ကြောင့် ထိုသူတို့၏ဘ၀ မငြိမ်းချမ်းကြရခြင်းမှာ ကာမအာရုံတရားတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အသိပညာ အားနည်းလို့လို့ ဆိုရပေမည်။
ဒါ့ကြောင့် မိမိ မပိုင်သင့်၊ မထိတွေ့သင့်၊ အလိုမရှိသင့်သော အာရုံ (အခြေ အနေ)များကိုလည်း သုံးသပ်မိဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဒါ့အပြင် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကလေးသူငယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဥပမာအားဖြင့် ဦးလေး၊ အစ်ကိုများမှ တူမ၊ ညီမအရွယ် ကလေး ငယ်များနှင့် အဒေါ်၊ အစ်မများမှ ကိုယ့်တူ၊ ကိုယ့်မောင်လေးများအရွယ် ကလေးငယ်များအပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုး၍ သာမန်ထက်လွန်ကဲစွာ ပွေ့၊ ဖက်၊ နမ်း၊ ရှုံ့ကြတဲ့အခါ ထိုကလေးငယ်တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့၏ အထိအတွေ့ (ဖောဋ္ဌဗ္ဗ) အပေါ်မှာ သာမန်ထက် သာယာမှုများဖြစ်သွားတတ်ပြီး ထိုယောက်ျားလေးတို့သည် မိန်းမ အထိအတွေ့ လွန်ကဲမှုကြောင့် မိန်းမလျာများဖြစ်သွားရခြင်းနှင့် ထိုကလေးမလေးတို့သည်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက် ယောက်ျားလေးများနှင့် အလွန်နီးစပ်စွာနေလိုမှုတို့ကြောင့် ဘ၀ပျက်ရခြင်းတွေဟာလည်း ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှုလွဲမှားလို့ တနည်းအားဖြင့် လိင်ပညာရပ် အသိဥာဏ်အားနည်းလို့်ပဲလို့ သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပေသည်။
ဒါ့ကြောင့် ကာမအာရုံတရားတွေအပေါ်မှာ မိမိတို့နှင့် သင့်၊ မသင့်၊ တန်၊ မတန်၊ ပြုသင့်၊ မပြုသင့်တို့ကို စိစစ်ဝေဖန်သော အသိဥာဏ်များအားနည်းနေကြမည်ဆိုပါက ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားမှုများဖြစ်နေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုသူတို့ဘ၀ဟာ ငြိမ်းအေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် လိင်ပညာရပ်လေ့လာသင်ကြားမှုကိုလည်း နံပါတ် (၃) သီလတွင် ပုံစံဖြည့်၍ နားလည်စောင့်ထိန်းနိုင်ကြပါလေ။
(၄။ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် လှည့်ဖြားမှု (မုသာဝါဒ) ကို မပြုရခြင်းကို – – – – ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။ )
“၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်လို့ အာရုံခံစားကြတဲ့အခါမှာ မိမိနှင့် မသင့်သော မထိုက်တန်သေးသော ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်မှုများကို လိုလား၍ ရုံးစာ ရေးက အရာရှိလို နေထိုင်ချင်၊ သူဆင်းရဲက သူဌေးလို စားသောက်ချင်စတဲ့ မိမိတို့နှင့်မတန် ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်ကြခြင်းကြောင့် ထိုသူတို့သည် ဒေါင်းယောင် ဆောင်သော ကျီးကဲ့သို့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်ကာ နဂိုအခြေအနေ တန်ဘိုးမှ တဖြည်းဖြည်း လျှော့ကျသွားပြီး ဘ၀မှာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ရခြင်းသည် မိမိ မပိုင် (အလိုဆန္ဒနဲ့ မတန်) သော ကာမအာရုံတွေ အပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပေသည်။”
ကာမေသုဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုင်ရာ ပုံစံတွေမှာ ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်
ကိုယ်နဲ့ တန်ရာတန်ရာပေါ်မှာပဲ အလို၊ အပိုမရှိ ခံစားတတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
အဲဒါကို သူဆင်းရဲက သူဌေးအစားစားမျိုးတွေကို စာသောက်မိခဲ့လို့ စွဲလန်းမိပြီး နောင်အဲဒီလိုမျိုးပဲ စားဖို့ပဲ ကြံစည်းအားထုတ်နေတော့မယ်၊
မိမိအခြေအနေက ဆင်းရဲသား၊ စိတ်က (ဘ၀င်မြင့်) သူဌေးလိုဆိုတော့
ဒေါင်းယောင်ဆောင်ချင်တဲ့ ကျီးကန်းလို “ဟိုမရောက် ဒီမရောက်” ဖြစ်နေရလို့ ဘ၀မှာ ပေါတောတောနဲ့ ဘ၀င်ရူးလို့ အပြောခံရတဲ့ “လူပေါကြီး”ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားရခြင်းနဲ့
လူ့တန်ဘိုးကျဆင်းသွားရခြင်းသည် အရသာကာမအာရုံမှာ စွဲလန်းမှားယွင်းနေမှုကြောင့် က စခဲ့တာပါပဲလို့ ပုံစံဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ “ကံ” လို့ဆိုရတဲ့ “အမှု” မြောက်၊ မမြောက်ကို သတ်မှတ်ဖို့ရာမှာ ဘာစံနဲ့ သတ်မှတ်ကြမှာလည်းဆိုတာကို အရင်ပြန်မေးကြည့်ရဖို့တော့လိုပါတယ်။
တချို့တိုင်းပြည်တွေ (ဘာသာရေးတွေ)မှာ အရက်သောက်တာ အပြစ် “ကံ အမှု” လို့ မသတ်မှတ်ပေမယ့် တချို့တိုင်းပြည်တွေ (ဘာသာရေးတွေ)ကတော့ အရက်သောက်တာ အပြစ် “ကံ အမှု” လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ထပ်ပြီး တချို့ဘာသာရေးတွေကတော့ တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်တာကျတော့ မလွန်ရင် အပြစ် “ကံ အမှု” မသတ်မှတ်ပေမယ့် တချို့ကတော့ အပြစ် “ကံ အမှု” လို့ သတ်မှတ်ကြ ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ကံ “အမှု” မြောက်၊ မမြောက် ဘာစံတွေနဲ့ ပြောကြမလဲ။
တချို့ ဘုရားသခင် အလို ကျ၊ မကျနဲ့ သတ်မှတ်မယ်။ တချို့က သေပြီးနောက် ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ တန်ဘိုးတွေနဲ့ သတ်မှတ်မယ်။
တချို့ကတော့ မိမိ (ယနေ့ အခေါ် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ) မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ တန်ဘိုးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ကြသလို
တချို့ကတော့ ပစ္စုပ္ပန် လက်တွေ့အကျိုးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ကြမယ်။
“ကံ”လို့ ဆိုရတဲ့ အမှုမြောက် မမြောက်မှု အပေါ်မှာ သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အများကြီးပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အခု ဒီ post ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်က လူ့ငြိမ်းအေးမှုကို ဦးတည်တာ ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် လူငြိမ်းအေးမှုကို ပျက်ပြားထိခိုက်စေမှုနဲ့ ငြိမ်းအေးကိုဖြစ်စေမှု ဖြစ်၊ မဖြစ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး “ကံ”လို့ ဆိုရတဲ့ “အမှု”မြောက်၊ မမြောက်ကို ပုံစံဖြည့် နားလည်စေလိုပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားလို့ နည်းနည်းဝင်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်။ စား၊ ၀တ်၊ နေရေးဟာ လူတွေရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ပဲ။
အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့ မတန်မရာတွေ စား၊ ၀တ်၊ နေထိုင်မိလို့ မနိုင်မနင်းတွေဖြစ်ကုန်ရင် ဒီလူတွေ ဘယ်တော့မှ နလံထူမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ နားလည်မိပါတယ်။
ဒါ အစား၊ အ၀တ်၊ အနေတွေမှာ ဖြည့်ကျင့်မှုလွဲလို့ပဲလို့ တင်ပြကြည့်ချင်ပါတယ်။ post ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကတော့ ဘာပြောမလဲ မသိဘူးပေါ့။
ကာမေသုမိစ္ဆာဆိုရင် မြန်မာတွေက ဟိုကိစ္စလောက်ပဲ တွေးကြပုံရတယ်။ ဒီ ပို့စ်က စားဝတ်နေရေးတွေအကုန်လုံးကို ဆွဲစိပြလိုက်တော့ chitmg တို့လို လူတွေ နဲနဲပိန်းသွားတာဖြစ်မှာပေါ့။ အေးလေး ကိုယ် သန်ရာသန်ရာ တွေးကြမှာပဲ။ ကိုယ်လဲ လိုရာတွေးကြည့်နေတယ်။ ထင်တာလွဲရင်တော့ ဆောရီးပဲ။
ကာမေသု..ကို…လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့..သူတစ်ပါး သား၊ မယားအား အလိုမတူ ကာမ မလွန်ကျူးရခြင်းလောက်ပဲထင်ထားတာမို့.. အဲဒီအတွက်.. တော်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာ..
ကလေးသူငယ်က ကြီးလာတော့.. မိဘ..မောင်နှမ..ဆွေမျိုးအရင်းတွေထဲ အပြန်အလှန်စိတ်ကစားတာတွေ..။ လိင်မတူသူအချင်းချင်း.. (လူ့သဘာဝအတိုင်း ) စိတ်ဝင်တစားရှိပြီး..အိပ်မက်ထဲ.. မသိစိတ်ထဲ..သိစိတ်ထဲ.. ကာယကံမြောက်မဟုတ်ပဲ.. မနောကံအလျှောက်.. ထပ်ခါကျူးလွန်တတ်တာတွေ. စသဖြင့် ကိန်းဂဏန်းအထောက်အထားတွေ.. ရှာထားတာပါ..။
တကယ်တော့ ..လူက.. အင်မတန်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ကြီးတာပဲ..။
ခွေးတွေကမှ.. အချိန်အခါ.. ဥပမာ..တော်သလင်းလလောက်..”ထ” ကြတာ..
(ဘာသာတရားနဲ့ ဥပဒေတွေကသာ မထိမ်းထားရင်) အချိန်မရွေး.. နေရာမရွေးပဲ..။
အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့.. မိန်းမတွေ.. အလှကုန်ပစ္စည်းတွေများ..ထုတ်လုပ်ထားတာ များ..များ..လွန်းလှသပေါ့..။
အဲဒါကြောင့်..ခုဆို.. ၇ဘီလီယန်လူဦးရေနဲ့.. တကမ္ဘာလုံး.. တခြားအကောင်တွေနေစရာတောင် သိပ်မရှိတော့ဘူးလေ..။
အပေါ်ကစာမှာ.. လိင်တူချင်းဆက်ဆံတာက. သဘာဝမဟုတ်တဲ့..သဘောသက်ရောက်နေပါတယ်..။
ကျုပ်လည်း.. ခေတ်နဲ့ ပြန်ညှိကြည့်ဦးမယ်..။
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ သူ့အလုပ် သူ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေရင် ဘာမှ ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။
အဲဒါ သူ့အလုပ်ကိစ္စ မဟုတ်တာမှာ မမှန်မကန်သွားမိရင်တော့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာပေါ့/
အခုလိင်တူတွေ ယူနေကြတာ ဘာအတွက်လဲမသိ ?/
သဘာဝမကျရင် ပြဿနာဖြစ်မှာပဲ။ ပြဿနာဖြစ်ရင် သဘာဝက ဒါဏ်ခတ်မှာပဲ။ HIV ကြောင့် A ကိုက်ခံနေရတာ ဒါအဓိကပါ။
mgmaung comment အပေါ်မှာ ဥပမာထပ်ပေးရရင်
စက်ကရိယာ၊ အသုံးအဆောင်များကို သူ့ကိစ္စသာ သူလုပ်ခိုင်ရင်း ရေရှည် အသုံးခံ ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ဗူးဆိုတာ ရေနွေးကို ရေရှည်အပူခံ ထိန်းထားပေးတဲ့ ဗူး(ကရိယာ)တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒါ သူလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေ ထည့်သိမ်းမိမယ်ဆိုရင် တော့ ဒီဓာတ်ဗူး ရေရှည်ခံမှာ မဟုတ်သလို
နေအိမ်ရှိ ပြူတင်းတံခါးတွေကို လေနဲ့ အလင်းရောင် ၀င်ထွက်ဖို့အတွက် တပ်ဆင်ကြမှာ ဒါကို အိမ်နေလူများက အ၀င်အထွက် တံခါးမကြီးမှ ၀င်၊ ထွက်တာ မပြုကြပဲ ပြူတင်းတံခါတွေမှ တဆင့် ခုန်၊ ပျံကျော်လွှာပြီး ၀င်ထွက်နေကြရင် ဒီပြူတင်းတံခါးတွေ ရေရှည်ခိုင်ခန့်မှု အားနည်းလာမှာဖြစ်သလို လူမှာရှိတဲ့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ စတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာလည်း သူ့အလုပ်သူ မှန်မှန်ကန်ကန် မလုပ်ကိုင်ကြရင် ရေရှည်အသုံးခံမှုတွေ အားနည်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ သူ့ကာလ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသုံးဝင်မှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်သလို လူ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေသည်လည်း စနစ်တကျ သူ့အလုပ်သူ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုနေထိုင်ကျမှသာ ဘ၀မှာ အဆင်ပြေ ငြိမ်းချမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဟင်္သာ ကိုးသောင်း ဇာတ်တူသားစားကြလို့ ပျက်စီးကြရ”ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လို
ဇာတ်တူသားစားသလို လိင်တူချင်းသွားလာနေကြပါက လူသားတွေ ပျက်ဆီးကြရမှာမို့ လူ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေရဲ့ စံလွဲလုပ်ရပ်များကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုးပြစ်များကိုတော့ ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတို့တွင် အကျယ်လေ့လာသင့်ပေသည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေရဲ့ စံလွဲလုပ်ရပ်တွေရှိနေတယ်လို့.. မထင်မိပါဘူး..။
တချို့.. မိန်းမချင်း ယူထား..တူတူနေသူတွေဟာ.. လိင်ဆက်ဆံနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒါက.. သူတို့ချင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီ.. အတူတူနေ.. အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီနေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်..။
လိင်ဆက်ဆံရာမှာလည်း.. တကိုယ်ရေဖျော်ဖြေတာကို.. ပါတနာက.ကူညီပေးတာကလွဲလို့.. သဘာဝကျူးလွန်…ကျော်နေတယ်လည်း မဟုတ်ဘူးလို့.. ထင်မိတာပါပဲ..။
နိုင်ငံရေးရှု့ ထောင့်နဲ့ဆိုရင်တော့.. တိုင်းပြည်တပြည်မှာ.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေနည်းလာရင်.. လိင်တူတွေကို.. လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာနေရာပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်… တိုးတက်ဖို့အတွက်နဲ့.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများအတွက်.. အလွန်ကြီးတဲ့..space နေရာ ထွက်လာမှာပါ..။
အခုကမ့္ဘာလောကအသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာက.. ဖိုနဲ့မ ၂မျိုးထဲနဲ့တင်မဟုတ်လား..
အခု..ဖို+ဖို/ မ+မ နဲ့.. ဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးကြီးကျယ်သွားမလည်း.. တွေးကြည့်သိသာမှာပါ..။
(ဥပမာ..။ လိင်တူများအတွက်.. သီးသန့်အသုံးအဆောင်..အ၀တ်အစား တွေ..ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ခြင်း..။)
“ကာမအာရုံ (ကာမေသု)အား အလိုမတူ မပြုရခြင်း” ဆိုတဲ့.. ဒိဖွင့်ဆိုချက်က်ို..ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်..။
(အနည်းဆုံးတော့..) ရှေးစွန်းစွဲတွေရဲ့ ဖွင့်ချက်ထက်.. အများကြီးကောင်းတယ် ထင်မိတာပဲ..
နောက်ဆုံး စောတက တက်စရာတခုက…
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ထိမ်းသိမ်းရာမှာ.. ကျုပ်အနေနဲ့.. ပိုလွန်ကျော်လွန်နေတဲ့.. ၀ိရိယနဲ့.. စွမ်းအားသုံးရပါတယ်.။
ဒါရဲ့.. အကျိုးအနေနဲ့.. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်(ဒီရွာ)က.. အင်တာနက်ကမ္ဘာထဲ.. ဆက်လက်တည်နေတာပါပဲ..
လူတွေကို ..(အထူးသဖြင့်..) မြန်မာတွေ.. အသိသညာဖလှယ်ကြလို့.. အကျိုးရှိတာတွေရှိတယ်လို့.. ထင်မိပါတယ်..။
ဒါကို.. ကျုပ်က.. အလိုဆန္ဒနှင့် မတန် ဖြည့်ကျင့်ခြင်း ပြုနေရပေမဲ့…
လူသားငြိ်မ်းအေးမှုနဲ့.. တိုင်းတာ နှိုင်းထိုးကြည့်ရင်.. ကောင်းတဲ့ဖက်က ပိုနေတယ်.. တွက်လို့မရနိုင်ဘူလား.. သိချင်မိပါတယ်..။
လိင်တူ .ဖို+ဖို/ မ+မ တွေ သံယောဇဉ်နဲ့ အတူနေတာ
အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နေနေကြတာပဲ
အခုလိင်တူတွေ ယူနေကြတာ ဘာအတွက်လဲ?
တလောက ထိုင်းလိင်တူ မင်္ဂလာဆောင် တွေ့လိုက်တယ်/
သံယောဇဉ်နဲ့ ရိုးရိုးဆို မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ထိတော့ လိုမယ်မထင်ဘူး။
အခုဟာက မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတော့ ဒါ ဘာအတွက်လဲ?
ကြုံတုံး.. လူသားဟာ.. လိင်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ဘယ်လိုတွေသဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ် သိရအောင်.. ၀ိကိက..ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
တကယ်တော့.. Masturbation ဆိုတာနဲ့..Nocturnal emission က.. မနောကံနဲ့.. တဖက်သားကို.ကျူးလွန်ပြီးမှ.. သာယာပြီးမှ.. ဖြစ်လာတာတွေပါ..။
အဲဒါကို.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်.. အောက်က.. ဖွင့်ထားချက်နဲ့ ချတွေးကြည့်ဖို့ပါပဲ..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ..မလိမ်နဲ့နော…။
ကာမေသူတိ – ကာမေသု ဟူသည်ကား၊ မေထုနသမာစာရေသု – မေထုန်အကျင့်တို့၌။
မိစ္ဆာစာရောတိ ဧကန္တနိန္ဒိတော လာမကာစာရော။ [ ပဋိသံ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၀၄]
မိစ္ဆာစာရောတိ – မိစ္ဆာစာရဟူသည်ကား၊ ဧကန္တနိန္ဒိတော – စင်စစ်ကဲ့ရဲ့ထိုက်သော၊ လာမကာစာရော- ယုတ်မာသောအကျင့်တည်း။
အထက်ပါဖွင့်ဆိုချက်အရ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ – ဟူသောပုဒ်တွင် ကာမေသု အရ မေထုန်မှု့၊ မိစ္ဆာစာရ အရ စင်စစ်ဧကန် အမှန်ပင် ကဲ့ရဲ့ထိုင်သော ယုတ်ယုတ်မာမာပြုကျင့်မှု့- ကို ယူရပါမည်။
မှန်ပါသည်။ လောကတွင် ကိုယ့်လင် ကိုယ့်မယား၊ စည်းစိမ်ခံစားဘက် အချင်းချင်း သွားလာ ဆက်ဆံခြင်း ကို ပုထုဇဉ်တို့ အမြင်ဖြင့် အမှန်ပင်ကဲ့ရဲ့ထိုက်သော အမှု့ဟု မဆိုသာ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့ကဲ့သို့ အမိ, နှမ စသည် မခွဲ လွန်ကဲစွာသာ တွေ့သမျှမိန်းမ လာသမျှ ယောက်ျား ကြုံသလိုသွားလာ ပျော်ပါးလျှင်ကား ပညာရှိတို့အမြင်တွင် စင်စစ်ကဲ့ရဲ့ထိုက်သော ယုတ်မာသော အမှု့ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ- အရ ကိုယ့်လင် ကိုယ့်မယားမှ တစ်ပါး အခြားယောက်ျား အခြားမိန်းမ တို့နှင့် ဆက်ဆံပျော်ပါးခြင်းကို ကောက်ယူရ၏။
Frequency of masturbation is determined by many factors, e.g., one’s resistance to sexual tension, hormone levels influencing sexual arousal, sexual habits, peer influences, health and one’s attitude to masturbation formed by culture; E. Heiby and J. Becker examined the latter. Medical causes have also been associated with masturbation.
Different studies have found that masturbation is frequent in humans. Alfred Kinsey’s 1950s studies on US population have shown that 92% of men and 62% of women have masturbated during their lifespan. Similar results have been found ina2007 British national probability survey. It was found that, between individuals aged 16 to 44, 95% of men and 71% of women masturbated at some point in their lives. 73% of men and 37% of women reported masturbating in the four weeks before their interview, while 53% of men and 18% of women reported masturbating in the previous seven days
The frequency of nocturnal emissions is highly variable. Some men have experienced large numbers of nocturnal emissions as teenagers, while others have never experienced one. 83% of men in the United States will experience nocturnal emissions at some time in their life. For males who have experienced nocturnal emissions the mean frequency ranges from 0.36 times per week for single 15-year-old males to 0.18 times per week for 40-year-old single males. For married males the mean ranges from 0.23 times per week for 19-year-old married males to 0.15 times per week for 50-year-old married males. In some parts of the world nocturnal emissions are more common. For example in Indonesia surveys show that 97% of men experience nocturnal emissions by the age of 24.
ုkai ညွှန်ပြထားတဲ့ http://www.myatpanyagon.com/2010/05/blog-post.html ဆိုဒ်က
မိစ္ဆာစာရောတိ – မိစ္ဆာစာရဟူသည်ကား၊ ဧကန္တနိန္ဒိတော – စင်စစ်ကဲ့ရဲ့ထိုက်သော၊ လာမကာစာရော- ယုတ်မာသောအကျင့်တည်း။ ဆိုတာတွေသည် မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓအထာဆရာတွေရဲ့ အဖွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာမမှားယွင်းမှုအပေါ်မှာ ကိုးကွယ်သော ဘာသာအလိုက်တော့ တူမယ်လို့ ယူဆလို့ မရနိုင်ပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် မယားလေးယောက် ယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ ပထမဆုံးမိန်းမမှ လွဲရင် နောက်ထပ် ယူသောမိန်မများ မယားရှိသော လင်နှင့် မှားသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အချို့သော လူမျိုးစုတွေမှာ အမျိုးသမီးဦးရေ နဲပါးတာမို့ ညီအစ်ကို တစ်စု မိသားစုတစ်ခုမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ ခွင့်ပြုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ထိုမိန်းမကိုပဲ ညီအစ်ကိုအားလုံး ပေါင်းဖော်ရတာမို့ လင်ရှိမယားကို ကျူးလွန်းနေကြတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုပဲ ကျင့်ကြမှ ဆိုရင်တော့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဦးရေ မမျှတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လက်ဦးတဲ့သူတွေမှ မိန်းမ ရရမလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် အချို့သော ပညာရှင်တွေက အလိုတူရင် ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ မဖြစ်လို့ ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။
အလိုမတူရင် ကိုယ့်မိန်းမတောင်မှ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဆိုသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အလိုတူဆိုတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအတာကတော့ ကျယ်ဝန်းမှာပေါ့။
ယောက်ျားက အလိုတူမှလား၊ မိန်းမက အလိုတူမှလား။ အုပ်ထိန်းသူက အလိုသူမှလား။
ကိုယ်ဟာကိုယ် အိုကေနေတာ၊သူ့ဟာဖတ်လိုက်ရင် လူ လည်လည် ထွက်သွားတယ်။
ပြန်ပြန်စစ် နေရတာက တလုပ်။
ဘာတွေလည်သွားတာလဲ ကိုယ့်လူရ။ လည်သွားရင် ပြန်တည့်လိုက်ပေါ့။ ဟိုဟာလေး ကင်းနေရုံနဲ့ လုံပြီးမထင်နဲ့ ။အဲဒါက ကိုယ်အထိအတွေ့ အပိုင်နဲ့ပဲဆိုင်သေးတာ။ ကျန်တဲ့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျာတွေရဲ့ ထိတွေ့မှုတွေလဲစစ်ဦး။
ကိုယ်လည်း အခု အဲဒီအလုပ်တွေစစ်နေလို့ အဖော်ညှိကြည်တာ။
” ကြောင်… ပြာသို၊ ခွေး… တော်သလင်း၊ လူ မသေမချင်း” တဲ့ဗျ….
“ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ” ကာမေသု= ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်တရားတွေ အပေါ်မှာ၊ မိစ္ဆာစာရ = ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားစွာ လွန်ကျူးခြင်း၊
ကာမေသုကို ဖို၊ မထိတွေ့မှု (ဖောဋ္ဌဗ္ဗအာရုံ) တစ်ခုထဲနဲ့ဆို လုံလောက်ပါ့မလား။
ဖို၊ မထိတွေ့မှု (ဖောဋ္ဌဗ္ဗအာရုံ) တွေမှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားခြင်း (သို့မဟုတ်) လွန်ကျူးခြင်း (ပုံမှန်ထက် လွန်ကျူးမှု)လို့ ဖွင့်ဆိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့ ငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖို၊ မထိတွေ့မှု (ဖောဋ္ဌဗ္ဗအာရုံ)တင်မက၊
အဆင်း ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားစွာ လွန်ကျူးခြင်း။
အသံ ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားစွာ လွန်ကျူးခြင်း။
အနံ့ ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားစွာ လွန်ကျူးခြင်း။
အရသာ ကာမအာရုံတွေအပေါ်မှာ ဖြည့်ကျင့်မှု လွဲမှားစွာ လွန်ကျူးခြင်းဆိုပြီး ငါးမျိုးလုံးစုံအောင် ကိုငြိမ်းအေးဆိုသူတိုက် တွန်းသလို ပုံစံဖြည့်ပြီး နားလည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ရေတွင်းပျက်ထဲမှာပြုပ်ကျနေတဲ့ မန္တလေးဂေဇက်ထဲက ခေတ်နောက်ကျနေသူတွေအနေနဲ့
ကာမေသုဆိုတာကို ဟဝှာပြုတယ်လို့ဘဲ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ မတွေးကြဘဲ
mggwa says လို
အပြောကျယ်လှတဲ့ သမုဒ္ဒရာဂျီးထဲမှာ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်
ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာ့ဆရာဂျီးများရဲ့ အဆိုအမိန့်များကို
ကာမေသုဆိုတာ ဟဝှာပြုတယ်လို့ဘဲ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ မတွေးကြဘဲ ဘောင်တွေဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် နေစရာတောင်ရှိပါတော့မလား။
မြန်မာတွေက ဟဝှာ ပြုတာကို ကိလေသာလို့ ထင်ကြတယ်။ ဒါသဘာဝကိစ္စပဲ။
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားက သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ခိုင်းတာလား။ သဘာဝအတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန်နေတတ်ဖို့လား စဉ်းစားကြည့်။
သဘာဝအတိုင်းမနေပဲ အလျော့၊ အတင်းတွေနဲ့ နေမှ ကိလေသာလို့ mggwa ဖွင့်လိုက်၏။
ဒါဆိ်ု သဘာဝအတိုင်း ဟဝှာ ပြုတာ ကိလေသာလား။
ဒါကို ကိလေသာလို့ ထင်ရင် ကိလေသာကုန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင် ခေါ်ခဲ့။
ဟိုးမုန်း အားတိုးဆေးတွေ ထိုးပေးလိုက်မယ်။
ပြီးတော့ – – – – ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆက်တွေးကြည့်။
ကိုယ့်လူတို့ရေ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သာလုပ် မလွန်စေနဲ့။ လွန်ရင်တော့ – – – – — ။
လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြီး comment ပေးတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဖတ်လိုက်တဲ့စာကို မိမိဥာဏ်နဲ့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်တွေးပြီးမှသာပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်း ရွာထဲက ကွန့်မန့်တွေဖတ်ရတာ
ဘာသာရေးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစော်ကားလာသလိုပါဘဲ။သူကြီးနဲ့ ရွာထဲကတာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေနည်း
chityimhtoo ရယ် အထင်တော်မလွဲလိုက်နဲ့
ကိလေသာကို သိမှ ပယ်သတ်နိုင်မှာ
ဒါမှ ဘာသာရေးတွေမှာ ပီပြင်မှာ၊
ဒါပေမယ့် အလယ်စွဲနေတဲ့ အစွန်းတော့
လူဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်အပေါ်မှာ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက ဆိုကြတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကလေသူငယ်များကို ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တွေနဲ့ ထိတွေ့စေမှုများကို အုပ်ထိန်းသူများ သတိမူဖို့ လိုပါတယ်။
အစ်မတွေ၊ အစ်မအပေါင်းအသင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက အနေးနီး ကစားခဲ့ရတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ သာမန်ယောက်ျားတွေထက် ဆန့်ကျင်ဖက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ပိုစိတ်စားတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့ယောက်ျားလေးများ မိန်းမလျှာ ဖြစ်သွားရခြင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ရမှု ပမာဏလွန်ကဲခဲ့လို့ ဖြစ်ရကြောင်းကို လိင်စိတ်ပညာက ဆိုပါတယ်။
Scientists: Modern humans mated with different species
A new report published Tuesday finds that modern humans may share similar genes with that ofanow-extinct species similar to neanderthals.
Professor Mattias Jakobsson, of Uppsala University in Sweden who conducted the study in conjunction with graduate student Pontus Skoglund, say individuals living East Asia sharealarge portion of genetic material with the Denisovans.
This group, the Denisovans, is known only byafew bone fragments: A finger bone,atooth and possiblyatoe bone, which is still undergoing analysis. Denisovans reportedly lived in central and eastern Asia around 40,000 years ago, sharingacommon ancestor with Neanderthals and humans about 1 million years ago. Scientists say the species may have split with the Neanderthal branch nearly 300,000 years ago.
It is well known that Denisovans interbred with humans, as did Neanderthals. Previous research had traced the connection to people living in Oceania. However, the latest research is the first to find support for interbreeding in Asia.
“We are actually finding gene flow in Southeast Asia, so it’s not restricted to the Oceanian parts of the world,” said Dr. Jakobsson. “Our study coversalarger part of the world than earlier studies, and it is clear that it is not as simple as we previously thought.”
Scientists said they discovered the results by runningaseries of complex computer simulations of genetic data, seeking to understand how the limited gene information collected in population genetics research providedaconnection between modern humans and our ancient ancestors.
The study was published October 31 in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
Read more: http://www.thestatecolumn.com/health/scientists-modern-humans-mated-with-different-species/#ixzz1cTzD6xQJ